May 11, 2021 - Achawlaymyar
ခြင်ပြေးအောင် အိမ်မှာစိုက်နိုင်တဲ့ အပင် (၅) မျိုး
May 11, 2021 by Achawlaymyar
အခုလို မိုးရာသီမှာ ခြင်ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေဆိုတာလည်း ပေါမှပေါ ။ ဒီတော့ ခြင်မကိုက်အောင် နေဖို့ ကျန်းမာရေးဌာနတွေက အမြဲတမ်းဆော်ဩနေကြတာပေါ့။ နေ့နေ့ ညည အိပ်တဲ့အခါတိုင်း ခြင်ထောင်နဲ့ အိပ်ဖို့ ၊ ခြင်နိုင်ဆေးဖြန်းဖို့ နဲ့ ခြင်မပေါက်ပွားအောင် ဖုံး/သွန်/လဲ/စစ်နည်းတွေ သုံးဖို့ တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ အခုပြောမှာကတော့ ခြင်ပြေးစေဖို့ နည်းလမ်းထဲမှာ အသုံးလည်းတည့်ပြီး စိတ်ကိုပါ ကြည်နူးစေမယ့် အပင်လေးတွေအကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ကြောင်ဆေးပင် Photo: Freepik တစ်ခြားနေရာမှာတော့ မသိဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြောင်ဆေးပင်လို့ခေါ်သလို ကြောင်ရိုသေပင်လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။ စိုက်ရတာ အလွန်လွယ်တဲ့ သဘာဝပေါက်ပင်ဖြစ်ပါတယ်။ နာမည်အတိုင်း ကြောင်တွေ သိပ်ကြိုက်တဲ့ အပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အပင်ရှိရုံနဲ့တင် ခြင်တွေ မလာအောင် မောင်းထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ခြင်မကိုက်စေဖို့ တစ်ချို့တွေက … Read more
မနက် စောစော အိပ်ရာမထတတ်တဲ့သူတွေ ဒီစာစောင်လေးကို ဖတ်ကြည့်ပါ
“ေစာေစာထတဲ့ငွက္က အစာပိုဝတယ္” တဲ့။ အဲဒီလိုပဲ လူသားေတြမွာလည္း ဝီရိယရွိရွိနဲ႔ ေစာေစာထ၊ ဘဝအစီအစဥ္ေတြအတြက္ မနက္ခင္းေတြကို အေကာင္းဆံုး အသံုးခ်ႏိုင္တဲ့သူေတြက ေအာင္ျမင္မႈရဖို႔ ပိုမို လြယ္ကူတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ မနက္ေစာေစာဆိုတာ အရုဏ္တက္ခ်ိန္ ၄-၅နာရီကို ဆိုလိုတာ မဟုတ္ပါဘူး။ မနက္ ၆နာရီေလာက္ထရင္ကို တစ္ေန႔တာအတြက္ ေကာင္းေကာင္းလံုေလာက္ေနပါၿပီ။ မနက္ ၆နာရီ အိပ္ရာထသင့္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကေတာ့ ၁။ ကိုယ္စြမ္းကိုယ္စေတြကို ထုတ္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ပိုရလို႔ ၂။ တစ္ေန႔တာအတြက္ အခ်ိန္ဇယားဆြဲဖို႔ အခ်ိန္ရလို႔ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္သည္။ ၃။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔အတြက္ မနက္ခင္းက အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္ေနလို႔ ၄။ အလုပ္သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ပိုရတဲ့အတြက္ မနက္စာကို ေအးေအးေဆးေဆးစားႏုိင္လို႔ ၅။ မနက္ေစာေစာထတဲ့သူေတြက သူမ်ားေတြထက္ ေျခတစ္လွမ္းပိုသာေနတတ္လို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မနက္အိပ္ရာေစာေစာထျခင္းက … Read more
ကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာဦးညဆိုပေမယ့် ကျွန်မ မပျော်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့…..
ကျွန်မရဲ့ မင်္ဂလာဦးညဆိုပေမယ့် ကျွန်မ မပျော်ပါဘူး ဘာလို့လဲဆိုတော့….. မိဘတွေ အတင်းပေးစားလို့ ယူခဲ့ရတာဆိုတော့၊ သူနဲ့ကိုယ်ကလည်းအခုမှ မြင်ဘူး၊ တွေ့ဘူးတာ ဒါကြောင့်ကျွန်မ ကြောက်နေမိတယ် ပြောရင်းဆိုရင်း ဟော.. သူအခန်းထဲ ဝင်လာပြီ ကျွန်မကို ဘာလုပ်တော့မှာလဲ ကျွန်မ ငိုချင်စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရတယ် ကျွန်မ ကြောက်ပြီး တုန်နေတယ် သူ.. ကုတင်ပေါ် တက်လာတယ် ပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်ဝတ်ထားတယ့်အဝတ်အစားတွေချွတ်လိုက်တယ် ကျွန်မရဲ့ ပုခုံးလေးကို အသာလာ ကိုင်တာကြောင့် ကျွန်မရင်ထဲ ကိုရှိန်းဖိန်းပြီး တုန်သွားတာပဲရှင် ပြီးတော့.. ဟင်သူကျွန်မအနားကိုထပ်ကပ်လာပြီးတော့ ကျွန်မကို တိုးတိုးလေးကပ်ပြီး ပြောတယ်… “ငါတို့တတွေ.. ညီအစ်မတွေလိုပဲ နေသွားရအောင်ဟယ်”တဲ့……. တိန်!!!!!!!!! ဘဝအမောတွေ ပြေပျောက်နိုင်ကြပါစေ….။ 🤣🤣🤣 #Crdnaylattyoune #winhlaingoo ကြၽန္မရဲ႕ မဂၤလာဦးညဆိုေပမယ့္ ကြၽန္မ မေပ်ာ္ပါဘူး ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့….. … Read more
ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ဒန်ပေါက် ချက်နည်း
ထမင်းပေါင်းအိုး နဲ့ ဒန်ပေါက် ချက်နည်း အိမ်မှာပဲ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ဒန်ပေါက်ချက်တဲ့နည်း လေး ပြောပြပါ လို့ ပြောကြ လို့ ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထမင်း ပေါင်းအိုး နဲ့ ဒန်ပေါက် ချက်နည်း လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းများံ —— ၁။ ဒန်ပေါက်ဆန် ၂။ နို့စိမ်း ၃။ ထောပတ်(အပူပေးထားပါ) ၄။ ပဲစိမ်း ၊ စပျစ် စေ့ခြောက် ၊သီဟို စေ့ ၅။ သကြား ၊ ဆား ၊ ကြက်သားမှုန့် ၊ ဆီ ၊ ကြက်သွန်ကြော် ၊ ၆။ ဒန်ပေါက် အရောင်ဆေးရည် ၇။ ဒန်ပေါက်မဆလာ (ဖာလာစေ့.နာနတ်ပွင့်.သစ်ဂျပိုးခေါက်..ကရဝေးရွက်. ပြုလုပ်ပုံ အဆင့်ဆင့်ံ —- … Read more
MPT_Telenor_Ooredoo_Mytel_အကုန်ချိတ်လို့ရတဲ့_VPN,_လိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ချိတ်နည်းဖစ်ပါတယ် အများပြည်သူများ သိရှိအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါ။ အာလုံးဆင်ပြေပါစေ credit အောက်တွင်video နှင့်တကွ ဖော်ပြထားပါတယ်ဗျ ============= unicode MPT_Telenor_Ooredoo_Mytel_အကုန်ချိတ်လို့ရတဲ့_VPN,_လိုင်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ချိတ်နည်းဖစ်ပါတယ် အများပြည်သူများ သိရှိအောင်ပြန်လည်မျှဝေပေးကြပါ။ video နှင့်တကွ ဖော်ပြထားပါတယ် အာလုံးဆင်ပြေပါစေ &;
ကြေကွဲခြင်း – သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကကိုယ်ရင်ကို ပိုမောစေတာ
ကြေကွဲခြင်း သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကကိုယ်ရင်ကို ပိုမောစေတာ။ တသက်တာနားခိုပါမယ်လို့ တွေးထားဖူးတဲ့ ရင်ခွင်ဟာ ခုတော့ တခြားသူတယောက်အတွက် အရိပ်ဖြစ်နေလေရဲ့။ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အခြားသူတစ်ယောက်ကို သူ့ရင်ခွင်မှာ ခိုလုံနေတာတွေ့တော့ မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဟာ ကိုယ့်ရင်ကို အလုံးအရင်းအုံကြွလို့။ မတားမြစ်နိုင်‌တော့ပါဘူးလေ။ငေးကြည့်နေရုံပဲပေါ့။ နာကျင်မှုရဲ့ အတိန်အနက်ကို ကျန်ရက်ခဲ့သူတွေသာ သိတဲ့ခံစားချက်မျိုး။ သူ့တို့အပြုံးတွေ အသက်ဝင်တိုင်း ကိုယ်အပြုံးဟာ အသက်မဲ့လာတယ်။ ပြုံးရင်း ဝေ့လာတဲ့ မျည်ရည်စတွေဟာ မိုးပြိုမှာကို ကြိုသိနေတဲ့ လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပါပဲ။ ကြိုးစားမေ့ပစ်ပါလို့မပြောနဲ့။ သူ့ကို ချစ်နေသေးသ၍ တဆစ်ဆစ်နာကျင်မှုဟာ ဖြေဆေးမှမရှိဘဲ။ မပို( ထီးလင်း) Unicode ကြေကွဲခြင်း – သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကကိုယ်ရင်ကို ပိုမောစေတာ ကြေကွဲခြင်း သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိကကိုယ်ရင်ကို ပိုမောစေတာ။ တသက်တာနားခိုပါမယ်လို့ တွေးထားဖူးတဲ့ ရင်ခွင်ဟာ ခုတော့ တခြားသူတယောက်အတွက် အရိပ်ဖြစ်နေလေရဲ့။ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့အခြားသူတစ်ယောက်ကို သူ့ရင်ခွင်မှာ ခိုလုံနေတာတွေ့တော့ … Read more
နေ့ရက်တိုင်းမှာ သင့်ကို စိတ်ချမ်းသာနေစေမယ့် ပျော်ရွှင်ရေး သော့ချက်လေးများ
နေ့တိုင်းမှာ ပျော်နေဖို့ဆိုတာ မလွယ်ဘူးလို့ ထင်ကောင်း ထင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာ ကိုယ့်အပေါ်ကိုလည်း မူတည်နေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ပျော်ပျော်နေတတ်တာပဲ ဆိုတဲ့ စကားမျိုး ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပေမယ့် နေ့တိုင်း ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ သော့ချက်လေးတွေကတော့ အခုလိုပဲ ရှိနေပါတယ်။ ပူပင်သောကကို လျှော့ချပါ ပူပင်သောကတွေဆိုတာ အပူတွေပါ။ အပူတွေက ရင်ထဲမှာ များလေလေ ကိုယ့်ကို ပူလောင်စေလေ ဖြစ်ပြီး သင့်ကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ နည်းသထက် နည်းသွားစေမှာပါ။ ဒီအတွက် ပူပင်သောကတွေကို လျှော့ချပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ပူပင်သောကတွေကို လျှော့ချတဲ့အခါ ဖြေရှင်းသင့်တာကို ဖြေရှင်းလိုက်တာမျိုးနဲ့ စိတ်ကို နှစ်သိမ့်မှု ပေးတာမျိုးနဲ့ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ပျော်စရာတွေကို ပိုတွေးကြည့်ပါ ပျော်ရွှင်တဲ့အချိန်မှာ ထွက်တဲ့ … Read more
မနက်စောစော တစ်ကြောင်းတည်းသာ ရွတ်ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟောဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်
မနက်စောစော တစ်ကြောင်းတည်းသာ ရွတ်ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟောဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး ပရိသတ်ကြီး တို့အတွက်ကောင်းသတင်းလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ်မိမိမှာရှိနေတဲ့ လာဘ်တွေ မနိုးဘဲ မပွင့်ဘဲရှိနေရင် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးတာနဲ့ လာဘ်နိုး လာဘ်ပွင့်ပြီး ငွေတွေတလဟော ဝင်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်… တိုင်းနီးပါး လာဘ်ပွင့် လာဘ်ရွှင်ဂါထာတို့ ငွေဝင်ဂါထာ တို့ပဲ ရွတ်ဆိုနေကြပြီး လာဘ်ကိုနှိုးပေးဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါ တယ်အဲ့တော့ လာဘ်လာဘ ငွေကြေးတွေက ဝင်သင့်သလောက်မဝင်တော့ဘူးပေါ့ အဲ့တာကြောင့် ဒီလာဘ်နှိုးဂါထာလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ရွတ်ဆို ပုံကတော့မနက် အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်ပြီးတာနဲ့ ပိုက်ဆံအိတ်ကိုကိုင် မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကို အာရုံပြုပြီး ၁။ နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ ကို ၃ခေါက် ရွတ်ဆိုပါ။ ၂။ သရဏဂုံ … Read more
ပြည်သူအားလုံးပြိုင်တူ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ၂၀ရာခိုင်နှုန်း
ပြည်သူအားလုံးပြိုင်တူ ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဖိုး ၂၀ရာခိုင်နှုန်း ဖေဖော်ဝါရီလ မတိုင်ခင်က …ရွှေဈေး 1,330,000၊ အခု 1,600,000 ကျော်ဒေါ်လာဈေး 1430၊ အခု 1600 ကျော် ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံ သိန်း 100 ပိုင်တဲ့လူဟာအခုဆိုရင် သိန်း 80 ဖိုးလောက်ပဲ တန်ဖိုးရှိတော့တယ်။ မြန်မာကျပ်ငွေ တန်ဖိုး (20%) လောက် ကျသွားတယ်။ အရင်တုန်းက သိန်း 100 ဘဏ်မှာရှိရင် သိန်း 100 လုံးကိုယ်ပိုင်တယ်။ အခု ဘဏ်ထဲက သိန်း 100 က ချက်ချင်းလိုချင်ရင် 92 သိန်းဝန်းကျင်ပဲ ရတော့တယ်။ အဲ့တော့ တွက်ကြည့် အရင်က သိန်းတစ်ရာက ရွှေ7ကျပ်ခွဲသား ဝယ်လို့ရတယ်။ အခု သိန်းတစ်ရာက … Read more
ချစ်ပြတာနဲ့ ချစ်တတ်တာ ဘာကွာလဲ သိလား ( မသိရင် ပြောပြမယ် )
ချစ်ပြတာနဲ့ ချစ်တတ်တာ ဘာကွာလဲ သိလား ( မသိရင် ပြောပြမယ် ) Fb ပေါ်မှာ tag လိုက် ၊ ပုံတင်လိုက် ၊ comments တွေမှာ ပလူပျံလိုက်နဲ့ တအားချစ်ပြတတ်တဲ့ ယောကျ်ားလေးတော်တော်များများက အဲ့ဒီကောင်မလေးကို တကယ်လက်ထပ်ယူတာ ရှားတယ်။ (မရှိဘူးမပြောဘူးနော်.. ရှားတယ် ပြောတာ.. ဟုတ်ရင်နာပေါ့. ကိုယ်က အဲ့သလို မဟုတ်ဘူးဆိုရင် ဆက်ဖတ်)ကိုယ်တိုင်လည်း cmt ရေးမှ ၊ အသဲပေးမှ ချစ်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ ။ အဲ့လိုလုပ်ပေးတဲ့သူကို ရွေးဖူးတယ် ။ သူက ကိုယ့်ကို တကယ်ချစ်တာပဲပေါ့ ။ နောက်ဆုံးတော့ ထုံးစံအတိုင်း သူကပဲ အသစ်ရသွားတယ်။ ကိုယ့်အသိ ကောင်မလေးဆိုရင် သူ့လူကြီးက cmt မရေးဘူး ။ … Read more